Soocane - Wikipedia
Soocane wuxuu ahaa ciidan xoog leh oo beesha balaadhan ee reeryoonis lahayd kaasoo deegaannada guban, saraar, hawd iyo Nugaalba ka sheegganaa qarniyadii 19aad iyo bilawgii qarnigiii inna dhaafay ee 20 aad.
Wuxuu ahaa ciidan sooc ah oo isku beel ah Wuxuu ahaa ciidan xul ah oo aan kala dhicin. Wuxuu ahaa ilmaadeer is dhaarsaday oon dagaal ku kala tegin Wuxuu ahaa ciidan nidaamsan oo madax iyo musdanbeedkiisaba leh. Wuxuu ahaa ciidan adag oo aan xadgudbin oo xilkas iyo xeerbeegti u taliso waxyaabo badanna kaga soocnaa ciidamo beeleedyo badan oo taariikhda Somalida soo maray.
Inkastoo aan la hubin goorta iyo sida magacu ku baxay haddana sifahaa aan kor ku xusay midkood ama dhammaantood ayaa loo malayn karaa in magaca Soocane ka yimi.
Taariikha kooban ee laga hayo Soocane ayaa u marag ah awoodda ciidankaas iyo deegaammada kala fog ee fardahoodu gaadheen. Ma ahayn ciidan dagaal keli ah ku kooban ee waxa taariikhdu xustay inay ummado badan oo isku rogman lahaa idamka Ilaahay ku kala badbaadiyeen Eebbena ku guuleeyey. Ciidankaas oo dagaallo badan la galay beelaha deriska, kuwo durugsan iyo qawlaysatadii Daraawiishta waxay iskood u kala tageen jabkii Daraawiish ee 1920.
Abwaankii Gabayxoog ayaa gabay ku sifeeyey laxaadka Soocane islamarkaana tilmaamay kana marag kacay inay Soomaali oo dhan ka soo hoydeen. Isaga oo ciidankaa laga qayliyey guhaamaya waa kii yidhi.
Soomaali oo idilba waw sacatareeyeene Soocane Ilaahoow ku bixi sebenka duulaaya Samaydiin ma dhiidhido maalintay seenyo ololayso Sacad Yuunis iyo Bihidarays saymo ugu oodma Sawliila waataad wax badan uunka sababteene.
Soocane wuxuu ahaa ciidan ay hagaan waayeel ruugcaddaa, culimo Alle yaqaan ah iyo hogaamiyeyaal aan libiqsan kuwaasoo nin kastoo is waalayba keeno ku soo xidhay. Beelo dhawr ah oo awood is biday ayaa ciidankani kibir jebiyey kuwo kale oo damac lahaana ku kellifey inay candhuuftoodii dib u liqaan. Soocane waa ciidanka goobaha badan Daraawiish kula dagaallamay ee maqadimiintii Maxamed Cabdulle Xasan mawtiyey fardihiisa kuwii ugu qiimaha badnaana ka furtay.
Ugu danbayn waxa Soocane sawir innaga siinayaa sida imaatinkii Ingiriiska ka hor iyo xilligii Daraawiisheedba ay qabiilooyinka Soomaaliyeed u kala awood iyo ciidan badnaayeen.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Soocane&oldid=199935"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 5 Abriil 2020, marka ee eheed 17:57.